Vavaka 30 hahombiazana amin'ny fanadinana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka 30 hahombiazana amin'ny fanadinana
Afaka manao ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy.
fahombiazana mety daholo ny teraka rehetra. Sitrapon'Andriamanitra ny hahita fahombiazana tsara ny Chldrenany rehetra. Androany isika dia hanao vavaka mba hahombiazana amin'ny fanadinana. Ity vavaka ity dia mety ho an'ireo mpianatra manoratra fanadinana akademika toa ny WASSCE, JAMB, SAT, TOEFL, GCE, fanadinana ara-pahasalamana, fanadinana kaonty Chartered, na fanadinana matihanina hafa na eo an-toerana na avy any ivelany. Miaraka aminao Andriamanitra, tsy misy fanadinana izay tsy azonao alefa, tsy misy lohahevitra izay tsy azonao. Ity vavaka ity mba hahombiazana amin'ny fanadinana dia hanokatra ny fahalalanao saina ary hitarika anao hahita fahombiazana lehibe amin'ny fanadinana amin'ny anaran'i Jesosy.
Maninona aho no mila mivavaka mba hahombiazana amin'ny fanadinana?
Ny vavaka ho fahombiazana amin'ny fanadinana dia tsy solon'ny fandinihana sy ny fiomanana amin'ny fanadinana ataonao. Ny vavaka raha tsy mandalina dia ho zavatra tsy mahatoky tena atao. Ny tenin'Andrimanitra dia manohitra mafy ny hakamoana. Na izany aza, nahoana isika no mivavaka dia satria tsy ny haingam-pandeha no hazakazaka, ary tsy ny ady ho an'ny mahery (Jereo ny Mpitoriteny 9:11), tsy avy amin'ny sitrapo na ny mihazakazaka fa avy amin'Andriamanitra izay maneho famindram-po. (Jereo ny Romana 9:16). Midika fotsiny izany fa, na dia efa nomaninay hiatrika fanadinana aza, dia mbola miankina amin'ny fisian'Andriamanitra isika. Ny ankamaroan'ny olona dia nanoratra tsara tamina fanadinana matihanina maro, fa ny soritr'izy ireo ihany no tsy hita rehefa vita ny fanamarihana. Ny sasany dia nanoratra tsara tamin'ny fanadinana iray, fa ny fanafoanana ny foibem-panadinana ihany. Ny toe-javatra maro dia mety hitranga izay tsy voafehintsika amin'ny fanadinana rehetra, izany no antony tsy maintsy itokisana amin'Andriamanitra.
Tombontsoa amin'ny fangatahana mivavaka amin'ny fahombiazana
Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny vavaka amin'ny fahombiazanao amin'ny fanadinana ataonao, saingy 3 hiresaka amin'izy ireo aho.
1) Fonenan'ny fanahy: Rehefa mivavaka amin'ny fahombiazana amin'ny fanadinana ianao dia voasarona amin'ny lafiny ara-panahy. Tsy misy devoly afaka mamitaka ny sainao alohan'ny, mandritra sy aorian'ny fanadinana. Amin'ny maha-pasitera ahy dia nahita tranga nisy olona tezitra aho, taloha kelin'ny fanadinana dia ara-panahy izany zana-tsipìka nalefa handiso fanantenana ny olona toy izany. Fa rehefa manolo-tena eo an-tanan'Andriamanitra ny fanadinana ataonao, tsy misy devoly mety misakana ny fahombiazanao.
2) Fihazonana Super: Rehefa mivavaka ny fahombiazana ianao amin'ny fanadinana, dia manampy anao hitazona ny zavatra novakinao ny Fanahy Masina. Iray amin'ny ministeran'ny Fanahy Masina ny mampahatsiahy izay rehetra nampianarina antsika. Jaona 14:26. Tsy maintsy mangataka ny Fanahy Masina ianao hampahatsiahy izay rehetra efa nianaranao sy izay novakinao. Na izany aza, ny fanahy masina dia tsy hampahatsiahy anao fotsiny izay efa nianaranao sy izay novakinao, koa tsy maintsy manolo-tena ianao handalina sy hamaky, hampitombo ny herin'ny Fanahy Masina.
3). Ambarao ny fahombiazanao: Eny, tsy maintsy mandidy amim-pahasahiana ny fahombiazanao amin'ny vavaka ianao. Ny Marka 11: 23-34, dia milaza amintsika fa afaka mahazo izay lazaintsika isika. Ka raha te hahita fahombiazana ianao amin'ny fanadinana ataonao dia tsy maintsy manambara azy ireo ianao ary rehefa manao ny vavaka ianao dia hiseho amin'ny loko manidina amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny vavaka ataoko ho anao anio dia izao, rehefa mandoa an'io vavaka ho an'ny fahombiazana amin'ny fanadinana io ianao dia tsy ho very na oviana na oviana ny fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tànan'Andriamanitra mahery no hitari-dàlana anao amin'ny fizahan-kevinao ary hivoaka miaraka amin'ny loko manidina amin'ny anadahy jesosy ianao. Mivavaha amin'ny vavaka amin'ny resaka finoana ary manantena ny fahombiazanao amin'ny fanadinana amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Ray ô, misaotra anao aho fa manana ny tombontsoa hanoratra ity fanadinana ity ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy
2. Ray ô, ataoko eo an-tananao ny anaran'i Jesosy ity fanadinana ity (Lazao ny anaran'ny fizahana).
3. Ray ô, ambarako fa amin'ny alalan'ireo fanadinana ireo, tsy misy lohahevitra mahery vaika amiko amin'ny anaran'i Jesosy
4. Nambarako androany fa manana ny fahendren'i Kristy, noho izany, azoko avokoa ny lohahevitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy
5. Fanahy Masina mamy, tariho aho rehefa mianatra mikasika ireo fanadinana amin'ny anarana jesosy aho
6. Ry Fanahy Masina malala, ento ny valin-teniko rehetra izay novakiako ary efa nampianarina tamin'ny anaran'i Jesosy aho
7. Ray ô, ho anao aho, amin'ny alàlan'ireo fanadinana amin'ny anaran'i Jesosy ireto,
8.. Ray ô, misaotra anao aho fa ilay Andriamanitra manome hery hahomby amin'ny anaran'i Jesosy
9. Ray ô, misaotra anao aho noho ny fahendren'i Kristy izay miasa ato amiko amin'ny anaran'i Jesosy
10. Ray no ambarako fa tsy ho hety aho amin'ny fanadinana amin'ny anaran'i Jesosy
11. Na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana ity mari-pahaizana ity, dia hahomby tsy am-pitoniana aho ao amin'ny jesus amena
12. Nambarako fa tsy misy tendrombohitra izay matanjaka manohitra ahy amin'ny anaran'i Jesosy
13. Nambarako fa tsy misy na inona na inona ny tetika rehetra ataon'ny fahavalo mba hampiala ahy amin'ny fanadinana amin'ny anaran'i Jesosy
14. Ambarako fa ny fankasitrahan'Andriamanitra izay mahomby dia hanome fahombiazana lehibe anao amin'ny anaran'i Jesosy
15. Izaho dia mandà ny fahakiviana amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
16. Izaho dia mandà ny tsy fahombiazan'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
17. Ray ô, amboary ny diako amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy
18. Ray ô, ambarako anio fa satria mpiandry ahy i Jesosy dia tsy ho diso lalana intsony aho amin'ny fianarako amin'ny anaran'i Jesosy
19. Ray ô, araho ny diako mankany amin'ny lohahevitra mahitsy ary amin'ny fotoana mety amin'ny anaran'i Jesosy
20. Ray ô, misaotra anao noho ny nitahiany ahy fahendrena lehibe
21. Ray ô, avelao ny fahendrenao hitarika ahy amin'ny androko hanao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy
22. Ray ô, asio fanahin'ny fahendrena aho raha mihazakazaka hazakazaka amin'ny anaran'i Jesosy aho
23. Avelao ho hita eo amin'ny asako isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy ny fahendrena
24. Ray ô, omeo fahendrena aho amin'ny fomba ifandraisako amin'ny olona isan'andro ao amin'i Jesosy
25. Ray ô, omeo fahendrena aho mifandraika amin'ny vadiko amin'ny anaran'i Jesosy
26. Ray ô, omeo fahendrena aho amin'ny fifandraisany amin'ireo zanako amin'ny anarana jesosy
27. Nomen'ny Raiko fahendrena aho amin'ny fifandraisako amin'ny lehibeko ao amin'ny birao amin'ny anaran'i Jesosy
28. Ray ô, omeo fahendrena aho amin'ny fifandraisako amin'ireo mpanafidiko amin'ny anaran'i Jesosy
29. Ray ô, misaotra anao nanome anao fahendrena mihoatra ny natiora amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Ray ô, misaotra ny valin'ny fivavako.
Previous lahatsoratraSalamo 51 Famantarana vavaka ho fanadiovana sy famelan-keloka
Next lahatsoratra30 Fotoam-bavaka amin'ny volana vaovao miaraka amin'ny Soratra Masina
Mahmud Abubakar Bilbis 4 Mey 2021 Amin'ny 4:21 maraina
Sharhi: Allah dia avy amin'ny alkhairi
Vavaka mafonja ho an'ny fanasitranana
Teboka vavaka hanoherana ny lamin'ny mpianakavy ratsy
Teboka vavaka hanoherana ny mpiara-monina ratsy